प्रजातन्त्रको हस्ती जन नायक बि कोइरालाको १०५ औं जन्मजयन्ती मनाइँदै - अभियान खबर
प्रजातन्त्रको हस्ती जन नायक बि कोइरालाको १०५ औं जन्मजयन्ती मनाइँदै
काठमाडाैं । पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको १०५ औँ जन्मजयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि कठोर संघर्ष गरेका कोइरालाको विक्रम संवत् १९७१ भदौ २४ गते जन्म भएको थियो । जहानियाँ राणा शासनको विरोधमा उनका पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाले गरिब किसानले पहिरेको कपडा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरलाई पार्सल गरी पठाएपछि कोइराला परिवार भारत निर्वासनमा जानुपरेको थियो ।
उनको रिहाई पछि, भारतीय स्वतन्त्रताको साथमा उहाँले नेपाललाई परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्नुभयो। सन् 1947 मा उनी भारतबाट स्थापना गरे समाजवादी नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, जुन 1950 मा नेपाली कांग्रेस पार्टी भए।9मार्च 1947 मा, भाई गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई बिराटनगर जूट मिलन हड्तालको सहयोगको लागि कोइरालाले नेपाललाई पार गर्यो। उनी गिरिजा प्रसाद कोइराला र चार अन्य राष्ट्रिय कांग्रेसका अगुवाहरूसँग पक्राउ गरेको थियो र 21 दिन लामो लामो समयसम्म पहाडी क्षेत्रमा हिँड्ने हिसाबले काठमाडांैका सँगी आवेदकहरू साथ लिइन्। कैदीहरूको मार्चले धेरै ध्यान आकर्षित गर्यो र किसानहरूको गाँउमा यात्रा गर्ने किसानहरूलाई कट्टरपन्थी बनाउन मद्दत गर्यो। अरू गिरफ्तारहरूसँग कोइराला काठमांडु बङ्गलादेशमा राखिएका थिए तर ती चाँडै 27 दिनका भोटे हडताल, लोकप्रिय प्रदर्शन र अगस्त 1947 मा महात्मा गांधीको अनुरोधमा रिलीज गरे।
1968 मा तत्काल प्रधान पंचायतमा उदारवादी समूहको नेतृत्व गर्ने प्रधान प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले जेलबाट बी.पी. कोइरालालाई रिहा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेले। पछि जूनमा, थुपाले जेलबाट श्री कोइरालालाई रिलीज गर्न कठिनाइहरूको दबाबको कारण इस्तीफा लिन थाल्नुभयो। त्यसपछि उसले अन्ततः एक-निर्वासनमा बानरासमा बाँच्न छोडे। राजा बिरेन्द्र, इङ्गल्याण्ड र संयुक्त राज्य मा पढाई, 1972 मा आफ्नो पिता सफल भयो जब राजनीतिक वातावरण को क्रमशः सुधार को लागी मानिन्छ। तथापि, कोइराला, उनको 76 मा निर्वासनबाट फर्केपछि तुरुन्तै गिरफ्तार गरियो र सशस्त्र क्रांति प्रयास गर्न राजधानीको आरोप लगाईयो।
अन्तमा, मार्च 1978 मा, उहाँ सबै खारिज र दलको आरोपबाट हटाइयो। त्यसपछि, 1981 मा, उनलाई चिकित्सा उपचारको लागि संयुक्त राज्य यात्रा गर्न खाली गरिएको थियो। प्रधान मंत्री सूर्यबहादुर थापाले राजालाई श्री बी। पी। कोइरालालाई उपचारका लागि अमेरिका जानु पर्ने शाह चिकित्सक डा। एम.पी. पाण्डेबाट सिफारिस अनुसार अनुमति दिए। नेपाल सरकार अमेरिका मा उनको चिकित्सा उपचार को एक भाग बडा भयो, र बाकी परिवार र मित्रहरु को उनको भतीजी शैले अपडेटहय, डा। शुक्देदेव शाह द्वारा व्यवस्थित गरिएको थियो। अमेरिकामा थप चिकित्सा भ्रमणबाट फर्केपछि, उनी राजा बिरेन्द्रसँग दर्शकहरूको एक श्रृंखला थियो, किनभने उनले “राष्ट्रिय मेलमिलाप” खोजे। सन् 1995 मा विद्यार्थी प्रदर्शनीको दौडान उहाँ घरको गिरफ्तारीमा थिए।
तथापि, उनले राजा बिरेन्द्रको कल नेपालको राजनीतिक प्रणालीको प्रश्नमा राष्ट्रिय रेफन्डेनमको स्वागत गरे। रेफन्डमम नतिजा घोषणा गरिएको थियो राजनीतिक प्रणाली को बिरुद्ध बी.पी. कोइराला ले राष्ट्रिय रेफन्डमम को परिणाम को स्वागत गर्ने पहिलो नेता थियो र मान्छे को फैसले को स्वीकार गर्यो र दावा गरे कि रेफरलम निष्पक्ष र मुक्त थियो। यद्यपि, निर्वाचन प्रक्रियामा मतभेदको कारण वर्ग संगठनको सदस्यता खोज्नुको कारण, कोइरालाले 1981 को चुनावको माग गरे
गर्लफ्रेण्डलाई भन्न नहुने तीन कुरा के-के हुन ?
रुबिभ्याली म्हेन्दोमाया कलाकार संघको अध्यक्षमा आरम्भ तामाङ !